စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်: လက်ချောင်းများ အကြောင်း
လက်ညှိုးရဲ့ စကားကို မဆိုင်းမတွ ပြန်ပက်လိုက်ချင်သည့်စိတ်က လက်သူကြွယ်ရဲ့နှလုံးသားကို လာရောက်ဖိစီးလေသည်..
မင့်ဟာ ဒီကျောက်နီလက်စွပ်နဲ့ တန်တဲ့အကောင်စားမျိုးလားကွ.. လက်ညှိုးက ရယ်ရွှမ်းပတ်ရွှမ်းပြောလိုက်ပေမဲ့ သူ နာသွားသည်..
လက်ဖျစ်တတွတ်အတွင်း သူ ဒေါသအလျောက် ချက်ချင်းဆိုသလို တုန့်ပြန်ပြစ်လိုက်သည်.. စိတ်ထဲရှိသလောက် လက်ညှိုးကို ငေါက်ငေါက်ထိုးကာ ပြောပြစ်လိုက်သည်.. ဒေါသကလဲ ထွက်လှသည်..
လက်ညှိုးသည် ပြန်အပြောခံလိုက်ရသောအခါ ဖျတ်ဖျတ်ခါ နာသွားပြီး တုန်လှုပ်လွန်းသဖြင့် လက်မနှင့် သွားတိုက်မိသည်..
ထိုအခါ သူတို့ပြဿနာများအား လက်မက သတိထားမိသွားပြီး
ဘာရယ် ဒီလက်သူကြွယ်ဟာ မင့်ကို ဒီလိုပြောသလား.. ဒီကောင်က ဘာမို့လဲ.. နေနှင့်ဦး မင်းတော့လား.. ဟင်းဟင်း ဟု ကျုံးဝါးကာ..
အို ရှေ့ဆက် ရှေ့ဆက်.. စကားလုံးတွေ ပစ်ပေါက်ကြသည်.. မောဟတွေ ဒေါသတွေ မုန်တိုင်းထန်သွားသည်…
သူတို့ အကျိုးမဲ့ရန်ဖြစ်လိုက်ကြသည့် အကျိုးဆက်ကား ညာဘက်လက်သူကြွယ်သည် သူပိုင်ဆိုင်သည်ဟု အထင်ရှိထားသော ကျောက်နီလက်စွပ်ကလေးကို ဘယ်ဘက်လက်သူကြွယ်သို့ ပေးလိုက်ရလေတော့သည်..
သူ သတိမထားမိသည်ကား လက်ညှိုးတိုင်းကား လက်မများနှင့်နီးစပ်လှသည်.. အားကြီးသူအား မြှောက်ပင့်တတ်သော၊ အားနည်းသူအား နှိမ်ချလေ့ရှိသော လက်ညှိုးကား ညာဘက် လက်မအား ဆရာ ဟု ခေါ်လိုက်သည်နှင့် တပြိုင်နက် လက်မသည် သူ့စွမ်းအားအရှိန်အဝါကို အားကုန်သုံးကာ အခြင်းအရာအားလုံး ငြိမ်ဝပ်သွားသည် အထိ သူ့ခေါင်းကို မတ်မတ်ထောင်ကာ သူ့အား ပါဝါအာဏာပြခဲ့လေသည်..
အဆုံးတွင်ကား သူသာလျင် မှားခဲ့လေပြီ..
ဒေါသနဲ့ပြောမည့်စကားများအား မပြောခင် ခဏစောင့်ဆိုင်းပြီးမှ ၁၀ စက္ကန့်စာလောက် အချိန်ယူတွေးတောလိုက်ပါကွာ တဲ့.. အရင်တုန်းကတော့ မောက်မာလှပေမဲ့ အခုတော့ မာန်စွယ်ကျိုးသွားရှာသော တူထုမိသည့်အတွက် တခြမ်းစောင်းနေရှာသော ဘယ်ဘက်လက်မကြီးက သူ့အား နှစ်သိမ့်ရှာသည်..
သူသည် အဲ့ဒီစကားပုံအား သေသည်အထိ ခေါင်းထဲပစ်ထည့်လိုက်ရတော့သည်..
ညာဘက် လက်မသည် ဟိုဘက်ဒီဘက်လောကတွင် တချောင်းတည်းသော အပြစ်အနာကင်းစင်သော မာန်မာနထောင်လွှားခွင့်ရထားသူဖြစ်လေသည်.. သူ့ကိုကား အဘယ်သူမှ မထိပါးရဲကြ.. သူသည်ကား ဘာအလုပ်မှ မယ်မယ်ရရ မလုပ်သော်လဲ လက်ချောင်းအားလုံး၏ အချုပ်ဖြစ်လေသည်.. သူမရှိလျင်ကား မဖြစ်လေသောအခါ.. သူသည်သာ အဓိကဖြစ်လာလေသည်.. သူ့အား လက်ချောင်းများ၏ အဓိပတိ ဥသျှောင်ကြီးအဖြစ် သတ်မှတ်ထားလေသည်..
လက်ဆယ်ချောင်းစလုံးတွင် သူတို့ (သူတို့ဆိုသည်မှာ ညာဘက် လက်သူကြွယ်၊ ဘယ်ဘက် လက်သူကြွယ်၊ ညာဘက် လက်သန်း၊ ဘယ်ဘက်လက်သန်းတို့ကား) လက်ခလယ် နှစ်ဘက်စလုံးနှင့် ညာဘက် လက်မ တင်းပုတ်ကြီးကို ကြောက်ရသလို ညာဘက်ရော ဘယ်ဘက်ရော လက်ညှိုး နှစ်ချောင်းစလုံးအားလည်း ချန်လှပ်ထားခဲ့လို့ မရခဲ့ပေ..
လက်ညှိုးတို့ကား ခနဲ့သလို၊ ရွဲ့သလိုလို၊ မြှောက်ပေးသလိုလို၊ တွန်းအားပေးသလိုလိုနှင့် အဆုံးတွင်တော့ အဆင်းဘီးတပ်ပေးရုံမက ချောဆီပါ ထပ်ထည့်ပေးတတ်သော လက်အန္ဓတွေ ဖြစ်လေသည်.. သူတို့သည်ကား ကိုယ်တိုင်ကလဲ ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် မရှိလှသော်လဲ လက်ညှိုးတထိုးထိုးဖြင့် အပြစ်ပြောရာတွင် သူမတူအောင် ပြောင်မြောက်လှသူတွေ ဖြစ်ပေသည်.. အပြစ်ပြောတတ်ရုံသာ မက သူတို့ထက် အားကြီးသူများ ဂုဏ်ပါဝါရှိသူများအား ရှေ့မှဦးဆောင် မြှောက်ပင့် ချီးကျူး ကြွားဝါတတ်ကာ.. မျက်နှာသာရအောင် သူများအားလဲ လက်ညှိုးထိုးကာ ခိုင်းစေတတ်လှသည်.. သို့ရာတွင် သူတို့အား အပြစ်ပြောလျင်ကား ရှောင်လင်သိုင်းသမားတွေထက် အရှောင်အတိမ်းကျွမ်းလှလေတော့သည်.. လက်ချောင်းလောကတွင် သူတို့သည် နာမည်ကောင်းမရှိလှသော်လည်း သူတို့အား လက်ချောင်းတိုင်းက သတိထားရလေသည်..
သူတို့သည်ကား - သူတို့ဆိုသည်မှာ သူ (လက်သူကြွယ် ၂ ချောင်း) နှင့် သူမ (လက်သန်း ၂ ချောင်း) တို့ကား အောက်ကိုဖိ အထက်ကို ဖားကြသော လက်ချောင်းများကြားတွင် ညပ်နေပေလေသည်.. လက်မ၊ လက်ညှိုးနည်းတူ သူတို့သည်လည်း နောက်လက်တချောင်းအားလည်း အလွန်အမင်းကြောက်ရသေးသည်..
ထိုသူကား လက်ခလယ်ပင်တည်း.. လက်ခလယ်ကား သူကိုယ်တိုင်၏ သန်မာထွားကျိုင်းမှု၊ အားအင်ကြီးမားမှုကို အင်မတန် ဂုဏ်ယူလှလေသည်.. သို့မို့ကြောင့် သူသည် လက်တိုင်းအား ကိုယ်ကာယအားကိုး၊ ဗလအားကိုးကာ အမြဲတစေ နှိပ်စက်ကလူပြုချင်လှလေသည်..
လက်ခလယ် ၂ ချောင်းစလုံးရဲ့ မိုက်ရိုင်းစော်ကားပုံကား အမြဲတစေဆိုသလို သူတင်မက လက်သန်းတွေကိုရော လက်ညှိုးတွေကိုပါ ထိခိုက်လှသည်.. လက်ခလယ် မစော်ကားဝံ့သည်က လက်မတွေသာ ရှိမည်ထင်ပါသည်..
ထိုထိုလက်သုံးချောင်းကား ပြန်လှန်မပြောရဲသည့် လက်များအား ထည့်မတွက်ခဲ့သည်လား၊ အမှုထားစရာ မလိုဟု ထင်ထားခဲ့လေသလား… စော်ကားမြဲ စော်ကားနေလေသည်..
တနေ့တွင်တော့ သူသည် ပြဿနာတစ်ခု၏ အလယ်ဗဟိုသို့ ကျရောက်ခဲ့လေတော့သည်..
ညာဘက်လက်မကား သူ့အား သက်ညှာသောအားဖြင့်ဟု ခေါင်းစဉ်တပ်ကာ အပြန်ပြန်အလှန်လှန် စဉ်းစား၍ ပေးလိုက်သည်ဟု ဆိုသော ငွေရောင်လက်စွပ် အပေါအပဲကလေး တခုအား မချွတ်တမ်း စွပ်ထားဖို့ လာပေးလေသောအခါ သူသည် အစော်ကားခံရလေခြင်းဟု နှလုံးသားတွင် တနုံ့နုံ့ခံစားခဲ့ရလေတော့သည်..
စဉ်းစားကြည့်ပါလေ.. ရွှေစင် တပဲသားနှင့်ကွပ်ထားသော ကျောက်နီပဲခြမ်းကလေးကိုတောင် သူရယူခဲ့ရစဉ်က သူ့တန်ဖိုးသည် သည်လောက်နှင့် မထိုက်ဟု ယူဆခဲ့ပေမဲ့ လက်ဆောင်အဖြစ် တမြတ်တနိုးထားခဲ့ဖူးသည်.. အဲ့သည်လက်စွပ်ကလေးအား လက်ညှိုးနှင့်ပြဿနာတက်မှုကြောင့် ဘယ်ဘက်လက်သူကြွယ်ကို အလိုမတူဘဲ ပေးလိုက်ရစဉ်က နောင်တ တဖန် ဝမ်းနည်းခဲ့ရတဲ့သူသည် .. မပေးလျင်လည်း မပေးပါနှင့်ပေါ့.. သို့သော် ဘယ်လက်နှင့်မှ မတော်တဲ့ ဘယ်သူမှ မဝတ်ချင်တဲ့ ငွေရောင်ပျက်ပြယ်စ ဒီအစုတ်ပလုတ် လက်စွပ်မှ သူ့လာပေးရသလား.. သူသည် ထောင်းခနဲ ဒေါသထွက်သွားလေသည်..
လက်ခလယ်နှင့်လက်မက ပမာမခန့်ပြုံးနေပြီး၊ လက်သန်းကလေးကတော့ စိတ်မကောင်းလှသည့် မျက်နှာထားကို ပြလေသည်..
အမြဲ သရော်ခနဲ့နေကျ ဗီဇမဖျောက်နိုင်လှသည့် လက်ညှိုးက ရုတ်ချည်းထ၍
ဒါမျိုးနဲ့မှ လက်သူကြွယ်က တန်တာကွ.. ဟေ့ကောင် မင့် ဒီတခါတော့ ဒီလက်စွပ်ကို မဆုံးရှုံးစေနဲ့နော်.. ဒါမှ မဟုတ်ရင်တော့ မင့်တော့ ဒီတသက် လက်စွပ်ဝတ်ဖို့ မစဉ်းစားနဲ့တော့ဟေ့…
ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား.. အောက်ကလိ အောက်ကလာ လက်ဝါးချင်းတိုက် စည်းဝါးကိုက်ပြီး အော်ဟစ် လှောင်ပြောင်လိုက်သံများသည် သူ့ရင်ကို နာကျင်စေသည်..
ပါးစပ်ကို ပြင်လိုက်စဉ် ခဏမှာပင် လက်ညှိုးရဲ့ မထီတရီအကြည့်က သူ့ကို စကားပြောနေသယောင်.. ဟေ့ကောင် ငါ့ကို မင့် ပြန်ပြောဝံ့ရင် ပြောကြည့်လေ.. ဘာဖြစ်သွားမယ်ထင်သလဲကွ..
ရုတ်တရက် မှတ်သားထားသော စကားပုံက ဦးနှောက်ထဲ ဝင်လာလေတော့သည်..
သည်းခံပါ.. ဒေါသဖြင့် ပြောမည်ပြင်လျင် မပြောခင် ဆယ်စက္ကန့်လောက် စဉ်းစားပါတဲ့..
စဉ်းစားစမ်း.. မဖြစ်ဘူး လက်မက လက်ညှုိးကို အမြဲကာကွယ်ပေးမှာ.. ဒီလက်စွပ်လေးကို ခဏယူဝတ်လိုက်.. နောင်မတော်တော့မှ ပြန်ချွတ်ပေးဖို့ ဦးနှောက်ကို တိတ်တဆိတ် လာဘ်ထိုးလိုက်ရင် ဖြစ်သားပဲ… ဟိုလိုသာဆို ဟိုလိုဖြစ်မယ်.. ဒီလိုသာဆိုရင်.. ဒီလိုသာဖြစ်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ.. စသည်ဖြင့် ဆယ်စက္ကန့်စာလောက် တွေးလိုက်သောအခါ သွေးနည်းသွားလေသည်.. အနည်းငယ်ကြောက်ရွံ့သော စိတ်ကလေး ဝင်လာလေသောအခါ...
သူသည် ပါးစပ်ဖျားကိုရောက်လာသော စကားလုံးတွေကို အတွဲလိုက် အတွဲလိုက် မျိုသိပ်လိုက်လေသည်.. မဖြစ်သေးပါဘူးကွယ် လက်ရှိရပိုင်ခွင့်တွေ ဆုံးရှုံးသွားမှဖြင့်..
သူသည် သည်းခံလိုက်လေသည်.. သည်းခံသည်ဟု သူ့ကိုယ်သူ နှစ်သိမ့်လိုက်ကာ ခဏတဖြုတ် မျက်စိမှိတ် အညံ့ခံလိုက်လေတော့သည်..
အနည်းငယ် နောက်ကျသွားသည်ဆိုပေမဲ့ သူလည်း သူတို့နှင့်နည်းတူ ဟဲဟဲ ဟဲဟဲဖြင့် လိုက်ရီလိုက်လေတော့သည်..
သဘောတူကြောင်း အညံ့ခံလိုက်ကြောင်း ပြသသည့် ရီသံကြောင့် လက်ညှိုးသည် မထင်ထားသောအဖြစ်ကို မြင်လိုက်ရသူလို အံ့သြသွားလေသည်..
လက်ညှိုးကိုယ်တိုင်က ပထမ တခါလို ပြန်ပက်မည်ထင်ထားပြီး မရဲတရဲ သွေးတိုးစမ်းသည့်သဘောမျိုး လက်ချောင်းများ၏ အုပ်စုအားကိုးဖြင့် စော်ကားလိုက်ခြင်း ဖြစ်သော်လဲ လက်သူကြွယ်ရဲ့ အညံ့ခံမှုကို မြင်လိုက်သောအခါ..
နောင်တွင် ဒီ့ထက်ပို စော်ကားလျင်လည်း လက်သူကြွယ် ဘာမှမတတ်နိုင်ဟု ယူဆကာ ခပ်ကျောကျော ပခုံးပုတ်ကာ အနားမှ ထထွက်သွားလေသည်..
လက်ညှုိးရဲ့နောက် လက်ခလယ်က သူ့ကို ခပ်လှောင်လှောင်ပြုံးကာ လက်မကတော့ ပိုသာ မာန်ဝင့်သွားလေ သည်..
လက်သန်းကလေးရဲ့ အားကိုးရာမဲ့ မျက်လုံးကလေးကို သူမြင်မိသောအခါ..
ခန္တီစ သည်းခံခြင်းတရားကို လက်ကိုင်ထားလိုက်တာပါကွာ.. ဒီကောင်တွေက ဒီလိုပဲ မဟုတ်လားကွဲ့.. နို့မို့ရင် အရှည်အရှည်နဲ့ သူတို့ကို နိုင်အောင် ပြန်မပြောချင်ပါဘူးကွယ်.. စကားရှည်ပါတယ်.. အနိုင်လိုချင်သူ အရှုံးပေးတော့ နှလုံးအေးတာပေါ့.
အရွှတ်စကား သူဆိုပေမဲ့ လက်သန်းသည် စိတ်ပျက်လက်ပျက် ခေါင်းခါကာ သူ့အား ဖယ်ကျဉ်သွားလေတော့သည်..
သည်းခံခြင်းသည် အောင်မြင်ရာ၏ တဲ့.. သူသည် သူ့ကိုယ်သူ အားတင်းထားသော်လဲ လက်တွေ့တွင်မူကား ထိုကဲ့သို့ စိတ်ခံစားချက်မျိုး သူ့ကိုယ်နှိုက်က မခံစားရလေသောအခါ သူသည် စိတ်ဓာတ်ကျစပြုလာလေသည်..
စိတ်ကျရောဂါ စွဲကပ်လာသော လက်သူကြွယ်သည် အရင်ကလို မပျော်ရွှင်တော့ပေ .. လက်ချောင်းတိုင်းသည် သူ့ကို ခိုင်းဖတ်သဖွယ် ချဉ်ဖတ်သဖွယ် သဘောထားသည်ဟု ထင်လာသည်.. အမှန်တကယ်လဲ သူ့အား နှိမ်ချလှလေသည်.. ပွဲလမ်းသဘင်များကို သူမသွားရဲပေ.. သူသည် လက်ချောင်းများများ ဆုံမိလျင် စိတ်ညစ်လှသည်.. စိတ်ရွှတ်သဖြင့် စနောက်သည်ဟု အကြောင်းပြသော စကားလုံးများသည် သူ့အား ဓားပါးဦးချွန်ကလေးနှင့် တဆတ်ဆတ်စွသလို ခံစားလာရသောအခါ သူသည် ဝမ်းနည်းသွားလေသည်..
ငိုလျင်လည်း ကျစရာ မျက်ရည်မရှိတော့သော သူသည် အကန်းသဖွယ်သာ အမှောင်ထဲတွင် ပျော်မွေ့လေသည်.. သူသည် အယင်ကဆိုလျင်တော့ သူ့အား တခွန်းရွှတ်တိုင်း၊ တခွန်း နာကျင်အောင် ပြောလိုက်တိုင်း မျက်ရည်များသည် တာတမံဖွင့်ချလိုက်သလို အရှိန်အဟုန်မဲ့ အတားအဆီးမဲ့ ကျဆင်းကာ ငိုကြွေးမိလေသည်..
အခုသော်ကား သူသည် မကြာခဏမှသည် အမြဲတစေ အစော်ကားခံရ အနှိမ်ချခံရသောအခါ သူ့တွင် ငိုလျင် ကျစရာ မျက်ရည်များ တတိ တတိဖြင့် ကုန်ဆုံးသွားလေတော့သည်..
လက်ချောင်းများနှင့် ခဏတာ ကင်းဝေးသော တိတ်ဆိတ်လှသော ညအမှောင်ကမ္ဘာတွင်သာ သူသည် မူလအဖြစ်ကို ပြန်ရလေသည်..
အလင်းရောင်ဖြင့် နွေးထွေးလှသော၊ သစ်ပင်ပန်းမန်တို့ဖြင့် စိုပြေစိမ်းလန်းလှသော အသက်ရှိကမ္ဘာကြီးတွင် သူသည် အသုံးမကျသော လက်သူကြွယ်တချောင်းသာ ဖြစ်လေတော့သည်.. မျက်ရည်များ မထွက်တော့သဖြင့် မငိုတတ်တော့သော သူသည် ဟဲဟဲ ဟဲဟဲဖြင့်သာ လက်ချောင်းများကြားတွင် အပေါကြီးအဖြစ် အယောင်ဆောင်ကာ မပျော်သော နှလုံး၊ မရွှင်သော မျက်လုံးတို့ကို မနည်းပြူးပြဲကာ ရှင်သန်နေရလေသည်..
သူသည် နာကျင်လွန်းသဖြင့် ထပ်မနာနိုင်တော့သော၊ ဒဏ်ရာများ ရလွန်းသဖြင့် အကောင်းနေရာ တစိုးတစိတောင် မကျန်တော့သောအခါ မျက်နှာဖုံးအတုတခု ထပ်စွပ်ထားသလို ခံစားမှုထုံနေသော၊ နာကျင်မှု ဟုန်နေသော မျက်နှာထားဖြင့် ခပ်ပေါပေါလက်ချောင်းကြီးတခုအဖြစ်သာ အသွင်ပြောင်းထားလိုက်လေတော့သည်..
ရာစုနှစ်များ တပွန်းတပဲ့ဖြင့် လျင်မြန်စွာ၊ ရှည်ကြာစွာ၊ နာကျင်စွာ ဖြတ်သန်းသွားသော အကြိမ်များစွာ ပြီးမြောက်သွားသော မမျှော်လင့်ခဲ့သော တနေ့တွင် သူသည် လွတ်မြောက်ရာလမ်းစတခုကို ခလုတ်တိုက်မိသလို တွေ့လိုက်ရလေတော့သည်..
(၄း၂၃ pm, 19-10-2011)
at 3:04 AM Labels: စိတ်ထွက်ပေါက်
Anonymous October 19, 2011 at 3:48 AM
အယ်... တန်းလန်းကြီး... မြန်မြန်လေးဆက်ရေးပေးပါ. ဖတ်လို့အရမ်းကောင်းတာပဲ။ လက်ညှိုးနဲ့ လက်ခလယ်ကို ဖြတ်ပစ်ချင်စိတ်တောင်ပေါက်သွားတယ်။
အနော် October 19, 2011 at 4:24 AM
ဟင့်အင်း ဒါအဆုံးပါပဲ.. :(
Anonymous October 19, 2011 at 4:54 AM
))))ဟမ်(((( ဒါဆို ခလုတ်တိုက်မိတဲ့လမ်းစလေးက ဘယ်ကိုသွားပါလိမ့်။
mstint October 21, 2011 at 7:34 PM
Face book မှာ ညီမမြသွေးကနေ တဆင့်ဒီလင့်ခ်ကို လာလည်ရင်း 'လက်ချောင်းများအကြောင်း' ဖတ်သွားတယ် အနော်ရေ။
jr October 22, 2011 at 4:23 AM
...အလင်းစက်များ October 22, 2011 at 3:04 PM
ခံစားမှု တစ်မျိုးရတယ်......။ ကျနော်လည်း ဒါမျိုး ရေးကြည့်မယ် စိတ်ကူးတယ်။ ကျေးကျေး။
jasmine(တောင်ကြီး) November 7, 2011 at 7:40 AM
လက်ညှိုးနဲ့ လက်ခလယ်ကို ဖြတ်ပစ်ချင်စိတ်တောင်နဲနဲပေါက်သွားတယ်
ခင်မင်တဲ့ jasmine မကြီးဂျက်